विद्युत महशुल पूरै छुट हुनसक्ने ! : ‘छुट घरबेटी र डेरावाल दुबैलाई, इन्डक्सन चुल्हो घरघरमै’ – Enayanepal.com
विद्युत महशुल पूरै छुट हुनसक्ने ! : ‘छुट घरबेटी र डेरावाल दुबैलाई, इन्डक्सन चुल्हो घरघरमै’
अनलाइनखबरसँगको भिडियो अन्तर्वाताका क्रममा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेर सबै ग्राहकलाई २० प्रतिशत महशुल छुट दिने निर्णय हुने बताए । यसो गर्दा करीव एक अर्ब रुपैयाँ राज्यको तर्फबाट जनताले छुट पाउने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
उर्जामन्त्री पुनले यो महिनाको विद्युत महशुल बुझाउन ढिला भए पनि जरिवाना नलाग्ने प्रष्ट पारे । मन्त्री पुनले विद्युत महशुल छुटमा घरबेटी र डेरावाल सबै बराबरी हकदार हुने भन्दै कुनै घरधनीले डेरामा बस्नेसँग पहिलेकै दरमा महशुल उठाएमा सरकारले कारवाही गर्ने बताए ।
लकडाउनको अवधि तीनसाता जाने सम्भावना देखिएकाले कम्तिमा एक महिनाको महशुल मिनाहा गर्न जनस्तरबाट दबाव आइरहेका बेला मन्त्री पुनले त्यसबारे अहिले नै निर्णय नभएको बताए ।
यद्यपि परिस्थिति हेरेर जनतालाई अधिकतम राहत दिन सरकारले लकडाउन अवधिभरको विद्युत महशुल मिनाह गर्न सक्ने बताए ।
मन्त्री पुनले अहिले जनताले जति बिजुली उपयोग गरे पनि सरकारले दिन सक्ने भन्दै ग्यास चुल्होको प्रयोग घटाउन इन्डक्सन चुल्होमा छुट दिइएको बताए । उनले इन्डक्सन चुल्हो घर–घरमै अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने समेत बताए ।
मन्त्री पुनले भिडियो वार्तामा भनेका महत्वपूर्ण जानकारी उनकै शब्दमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पूरै महशुल छुट दिन पनि सकिन्छ
अहिले हामीले विद्युत उपभोग गरौं भनेर जनतालाई महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने तयारी गरेका छौं । इन्डक्सन चुल्हो बाहेकका ग्राहकलाई पनि त्यो छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएकलो विद्युत खपत बढाउन र उर्जा सुनिश्चितताका लागि पनि २० प्रतिशत छुट दिन्छौं महशुलमा ।
भोलि शुक्रवार विद्युत प्राधिकरणको बोर्डको बैठक बस्छौं । २० प्रतिशत सबै ग्राहकलाई छुट दिन्छौं । इडक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा एउटा घरमा न्युनतम ५० देखि १५० युनिटसम्म प्रयोग हुँदो रहेछ । अहिले हाम्रा सबै ३६ लाख ५० हजार ग्राहकबाट मासिक ५ अर्ब रुपैया महशुल उठ्ने रहेछ । २० प्रतिशत छुट दिँदा करीव १ अर्ब छुट हुन्छ ।
अहिले हामी २० प्रतिशत सबै तहका ग्राहकलाई छुट दिने तयारीमा छौं । हाम्रो विद्युत डिमाण्ड १२ सय मेगाट थियो । अहिले त्यो झेर छ सात समय मेगावाटमा झरेको छ त्यो पनि पिक टाइममा । हाम्रो करीव ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन आफ्नै छ ।
अहिले धेरै जनताले महशुलमा पूरै छुट होस भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ । अहिले हामी २० प्रतिशत छुट दिन्छौं लकडाउन लम्बिदै गयो र परिस्थिति अप्ठेरो हुँदै गयो भने सरकारले विद्युत उर्जामा के गर्ने भन्ने थप निर्णय गर्दै जाला । हामी जनताको अप्ठेरो हेर्दै जान्छौं । अहिले विद्युत अधिकतम प्रयोग गर्नुस् ।
विद्युत सप्लाई, इमरजेन्सी मर्मतमा जनशक्ति व्यवस्था गरेका छौं । निर्धक्क भएर बिजुली प्रयोग गर्नुस् । अहिले चैत महिनाको बिलमा छुट हुन्छ । पछिको अवस्था हेरेर अरु छुट हुन सक्छ । बिजुली महशुल तिर्न सक्ने समूहका पनि छौं, सरकारले गर्न चाहेमा लकडाउनको अवस्थामा एक महिनालाई निर्णय गर्न असम्भव छैन ।
कति देशले बैंक ब्याज मिनाहाको कुरा गरेका छन् । श्रमजीवीलाई थप राहतको घोषणा गरेका छन् । हाम्रो पनि बैंकको किस्ता यो महिना नलिन भनिएको छ । सबै मन्त्रालयले आ–आफ्ना काम गरेका छन् ।
जनतालाई संयमित भएर बस्नुपर्ने बेला ऋणको ब्याज, सप्लाईहरुको टेन्सनबिना निर्धक्कसाथ बस्ने वातावरण बनाउँछौं । अहिले २० प्रतिशत महशुल मिनाहाको व्यव्स्था गरिरहेका छौं, समग्र स्थिति हेर्दै जाउँ त्यसपछि पूरै छुट दिने विषयमा सकारात्मक रुपले सोच्न सक्छौं ।
छुट डेरावाललाई पनि, इन्डक्सन घरघरमै
हामीलाई डेरावाल मित्रहरुले प्रश्न गर्नुभएको छ । महशुल छुट सबैलाई हो । घरबेटीलाई जतिमा हो, त्यति नै डेरावाललाई हो । कुनै घरधनीले डेरावालसँग बढाएर लिए कारवाही गर्छौं, छुट भनेको सबै उपभोक्तालाई हो । घरबेटीलाई मात्र छुट हुन्न ।
कुनै घरधनीले पालना नगरेमा विद्युत प्राधिकरण नजिकका ग्राहक सेवा केन्द्रमा गुनासो गरेमा उचित कारवाही हुन्छ । मेरो आग्रह छ, घरबेटीले पनि सरकारले दिएको छुटलाई डेरावालसँग पनि पुराउनुस् ।
अब अर्को कुरा छ, इन्डक्सन चुल्होको । हामीसँग चार हजार इन्डक्सन चुल्हो आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । खाद्य व्यवस्था तथा वितरण कम्पनीसँग थापाथलीमा विक्रीका लागि राखिएको छ । मैले पनि हिजोमात्र किनेँ त्यही ठाउँबाट । मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको छु, चार हजार थान थापाथलीमा विक्रीमा राखेको छ ।
इन्डक्सन चुल्हो बजारमा पनि छ । उच्चस्तरीय समितिले खाद्य तथा इन्डक्सन सप्लाईका सामानलाई सकेसम्म होम डेलिभरी, अनलाइन सर्भिसमा कसरी हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि अपील गरेको छ । कम भन्दा कम मान्छे बाहिर निस्कने अवस्था बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ । मलाई लाग्छ, बाणिज्य मन्त्रालायले पनि मागका आधारमा घरघरमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाओस् ।
जो जहाँ हुनुहुन्छ, छेउ नजिकको ठाउँमा विक्री वितरण हुन सक्छ । वडालाई आधार बनाएर पनि जरुरी सामाग्री बिक्री गर्ने तयारी छ । चीनतर्फका दुई नाका स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ । निर्धक्क भएर आफूले खोजेका, चाहेका जरुरी सामान पाउने गरी व्यवस्था हुन्छ । अनलाइनखबरबाट